Okumnandi kakhulu 'Ukudla kwe-Anime' Okufanele Uzame Njengomuntu Othanda I-Anime - Okunye
Okumnandi kakhulu 'Ukudla kwe-Anime' Okufanele Uzame Njengomuntu Othanda I-Anime
Ukudla emhlabeni we-anime ihlala ibukeka ikhanga kakhulu kunokudla kwangempela.
Sonke siyayazi, futhi sonke siyicabanga njalo uma sibuka i-anime.
Ngokujabulisayo, ezinye wezitsha akunzima kakhulu ukwenza. Uma ukupheka kungesona isipho sakho, ezinye izitsha zivame ngokwanele ukuthi ungazithola kakhulu izindawo zokudlela.
Nazi izitsha ezingama-4 ze-anime okudingeka uzame ngokushesha:
# 1 - Mapo Tofu (Izimpi Zokudla)
Ngenkathi yesithathu Yezimpi Zokudla , UYukihira Soma ungena edokodweni emcimbini wokupheka. Omunye wabaqhudelani abaseduze ubhekele kakhulu ukudla kwaseChina futhi ukhetha ukukhonza uMapo Tofu.
UMapo Tofu ivela esifundeni saseSzechuan eChina. I-tofu isososo obomvu, obabayo, no-oily olele embhedeni wenyama egayiwe, okuvame ukuba ingulube noma inyama yenkomo.
Ngizamile lesi sidlo endaweni yokudlela yamaShayina edolobheni elingumakhelwane wedolobha langakithi. Ngangijabule ukuyibona kumenyu ngoba ngingumlandeli omkhulu we-Food Wars.
Nganikwa ithuba lokuthi ngibe nesitayela esijwayelekile noma iSzechuan, futhi ngakhetha isitayela seSzechuan. Ngithathe ukuluma okukodwa futhi ngavela ngaso leso sikhathi uxhunyiwe.
I-sauce yayinamahloni, kodwa ayizange ibambe iqhaza. Inyama egayiwe yayingenzima kakhulu futhi konke kuxutshwe kahle impela.
Ngincoma kakhulu lesi sidlo.
# 2 - Ingulube Cutlet Bowl (Yuri On Ice)
Uma ungakayiboni le anime, lapho-ke angazi ukuthi ubukade ukuphi.
U-Yuri Katsuki, omunye wabalingiswa abaphambili be-anime, uthanda ukudla izitsha zezingulube zezingulube futhi ubabiza nangokuthi isidlo sakhe asithandayo.
Lapho abanye abashushuluzi beqhwa bevakashela ikhaya lakhe, ubanikeza izitsha zokusika izingulube ukuba bazidle ngoba ziyintandokazi yakhe futhi uyajabula ukuhlanganyela nabanye.
Ingulube Cutlet Bowls, noma uKatsu Don, uthola leli gama emagameni amabili aseJapane: 'tonkatsu', okuyigama le-piglet cutlet, ne-donburi, okuyigama elisho 'isitsha esikhulu'.
Isitsha sivela ngawo-1920s futhi kusukela lapho sidliwe ngaphambi kwemicimbi ebalulekile, njengokuhlolwa okukhulu noma ukufana kwezemidlalo.
Ngazama uKatsu Don endaweni yokudlela yaseJapan ngenkathi ngisemhlanganweni we-anime. Bengizohola i-ramen dish lapho ngibona lokhu kumenyu futhi ngivele ngayi-oda.
Bekufanele ngithathe okulodwa kuphela ukuze ngazi ukuthi lesi sidlo siyamangalisa. I-cutlet yengulube enesinkwa yayimangalisa, futhi amaqanda no-anyanisi ayemnandi, ikakhulukazi lapho kuhlangene nelayisi.
Lapho nginambitha lesi sidlo, kwakulula ukubona ukuthi kungani uYuri asithanda kangaka. Wonke umuntu kufanele azame uKatsu Don uma benethuba.
# 3 IKofi Jelly (Impilo Eyinhlekelele KaSaiki K)
Ku-The Disastrous Life Of Saiki K, umlingisi oqavile, uKusuo Saiki, uvame ukudla i-jelly yekhofi lapho ezama ukusuka kukho konke.
Kuyindlela ayithandayo, futhi kungenzeka ancengeke ukuthi abambe inkunzi ibhange uma ungamnikeza nje i-jelly yekhofi. Uma uke wabona i-anime, cishe uzovuma.
Uma usungowamamenyu aseMelika nawaseBrithani, i-jelly yekhofi manje isiyisidlo esidumile saseJapan.
Izindawo zokudlela eziningi noma izincwadi zokupheka eJapan zizoba nale dessert eyijeli. Kungaba lula ukuthola lesi sidlo endaweni yokudlela, kodwa futhi ungasenzela ekhaya, kungaba kusuka ekuqaleni noma ukusebenzisa umxube osheshayo.
Ngisanda kuqeda isizini eyodwa yeSaiki K , futhi ngayithanda. Kangangokuthi ngangifuna ngempela ukuzama ijeli yekhofi.
Ngabheka izindlela zokupheka ngathola inqwaba yazo. Ngesikhathi sokuqala ngenza i-jelly yekhofi empeleni kuvele kahle, kodwa angizange ngifake i-gelatin eyanele noma ngilinde isikhathi eside ukuthi ngiqede. Kodwa-ke, into yokuqala engizamile yayimnandi.
Uma uyenza, qiniseka ukuthi ubeka okwanele i-gelatin kuwo.
# 4 - I-Egg Drop Soup (Izimpi Zokudla)
Lesi mhlawumbe yiso kakhulu okuvamile ohlwini.
Ezimpini Zokudla, lapho uYukihira Soma ezama ukuthola indawo e-dorm, kufanele enze isidlo esihlaba umxhwele umphathi wefomu, kepha akanazo izithako eziningi azosebenza ngazo.
Vele, uyadonsa enze isidlo esikhulu futhi enye yezinto azenzayo isobho lokudonsa iqanda.
Isobho Leqanda isidlo samaShayina esilula impela. Umhluzi wenkukhu usetshenziselwa ukubilisa amaqanda ashayiwe, kanti isobho livame ukufakwa u-anyanisi oluhlaza, upelepele, kanye ne-tofu.
Ngizamile le sobho kabili futhi ngiyayithanda. Ilula kakhulu, kepha ngihlala ngijabule ukuyibona kumenyu ngoba Ngiyazithanda Izimpi Zokudla.
Isobho kaningi lingaletha umuzwa wenduduzo kubantu, futhi le isobho alinjalo.
Ungayithola kalula kwimenyu ezindaweni zokudlela eziningi zamaShayina, kepha ifayili le- lula kwesitsha kungenza kube lula kuwe ukuthi ukwenze ekhaya.
Zonke lezi zidlo zimnandi, futhi wonke umuntu kufanele azame okungenani kanye empilweni yakhe.
Yikuphi ukudla kwe-anime ongakuncoma?
Imibukiso eyi-15 efanelekile yezingane nezentsha
27 Kwabalingiswa Abathandwa Kakhulu be-Anime
Landela iMasaomi Soma:
i-english ebizwa ngohlu lwama-anime ngohlobo